Lee ụwa mbụ film banyere Jizọs | Apg29
Lee ụwa mbụ film banyere Jizọs
Ọ bụ naanị ihe nkiri na kpamkpam dere na Akwụkwọ Nsọ na saịtị!
Site etinyere anụ ụlọ nri na cross, bụ nke mbụ film banyere Jizọs na naanị otu onye n'ụzọ zuru ezu e dere na Akwụkwọ Nsọ na saịtị.
Mgbe ụfọdụ, i nwere ike ịhụ ezigbo gold chọpụtara na Youtube. Nke a nkịtị film site na 1912 bụ nke mbụ film banyere Jesus! Ọ na-akpọ "Site ufene na Cross" ( "Site etinyere anụ ụlọ nri na cross").
Ọ bụ ihe na American film site na 1912 na e filmed na ebe ke Egypt na dịkọrọ ndụ Palestine.
The mbụ film banyere Jizọs
Site etinyere anụ ụlọ nri na cross, bụ nke mbụ film banyere Jizọs na naanị otu onye n'ụzọ zuru ezu e dere na Akwụkwọ Nsọ na saịtị. Ọ bụ na oge ya a azụmahịa ihe ịga nke ọma, bụ onye dere 30 ugboro mmepụta na-eri.
The film agwa akụkọ ndụ nke Jesus. The director Sidney Olcott nwekwara starred na film. Omee na onye dere Gene Gauntier dere edemede na kọwara ndị Virgin Mary.
Poster maka American film Site ufene na Cross (1912).
Ụfọdụ Bible ihe mara na nkiri. Ka ihe atụ, Jọn Baptist na-akọwa Jizọs dị ka Mezaịa, ma, anyị nwere ike ghara ịhụ baptism. Ebe ọ bụ na aha fim bụ nnọọ nkịtị mgbe ọ na-abịa na njedebe. Cross gụnyere, ma e nweghị mbilite n'ọnwụ.
Nke a bụ kwa ọjọọ n'ihi na e nweghị mbilite n'ọnwụ, mgbe ahụ, e nwekwara na-adịghị nzọpụta. Ma Jizọs Kraịst na n'ezie bilitere site na ndị nwụrụ anwụ na ndụ taa na mgbe ị na-anata Ya ga-azọpụta.
Jesus na cross.
A sụgharịa 26 asụsụ
Sidney Olcott bụ nke mbụ n'ezie ịghọta film ike na mere a oké njọ mmepụta banyere ndụ Jizọs na ebe na dịkọrọ ndụ Palestine. The film bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na natara nnọọ mma reviews. Ọ a sụgharịa 26 asụsụ na mgbe ahụ chefuo ụkpụrụ wepụrụ.
N'oge filming ghọrọ film arụ ọrụ a aja a ohi mnwale. The director Sidney Olcott nwere abụghị akụkụ nke uru, nke bụ 30 ugboro mmepụta na-eri.
Mgbe Vitagraph Studios zụtara Kalem Studios otú nwere film re-ntọhapụ na 1919. The film e mesịrị wepụtara na kwukwara music na akomako.
The idaha ebe Jesus na-eje ije n'elu mmiri e mere na abụọ ikpughe.
The mbụ ahuhu - ụwa mbụ film banyere Jizọs
Site njikwa obe
Site ufene na Cross (1912) A Silent Movie Review